နတေို့ငျး ဥ ဖို့လိုတယျ
HomeKnowledgeနတေို့ငျး ဥ ဖို့လိုတယျ
ကွကျကလေးက သူ့အမေ ကွကျမကွီးကို မေးတယျ။
" မမေေ .. ဒီနေ့ ဥ မဥလို့ ရလား.. သားတို့ အပွငျထှကျပွီး လြှောကျလညျကွမယျလေ " ။ ထိုအခါ ကွကျမကွီးက..
" မရဘူးသား၊ မမေအေ့လုပျ ရှိသေးတယျ "
" ဒါပမေယျ့ မမေေ အမြားကွီး ဥခဲ့ ပွီးပွီလေ " လို့ ကွကျကလေးက ပွနျပွောတယျ။ ကွကျမကွီးက လေးလေးနကျနကျ အသံနဲ့ ကွကျကလေးကို ပွနျပွောတယျ..
" အမေ တနေ့ ဥတလုံး ဥမှ လယျသမားကွီးရဲ့ ဟငျးခှကျထဲ မရောကျမှာ "
" ကလေး နငျမှတျထား …. အသကျရှငျ ရပျတညျမှုဆိုတာ ဖနျတီးထုတျလုပျမှုရဲ့ တနျဖိုး၊ သဆေုံးမှုဆိုတာ အဲဒီတနျဖိုး မဲ့သှားလို့၊ အရငျက လုပျခဲ့သမြှက အနာဂတျ နရောမွဲဖို့ ဘယျလိုမှ မစှမျးဆောငျနိုငျဘူး၊ အဲဒါကွောငျ့ နတေို့ငျး နတေို့ငျး ကွိုးစား အားထုတျရမယျ "
တကယျလို့ မငျးက သိမျးငှကျတကောငျ ဆိုပါစို့၊ ဘယျသူမှ လကျခုပျ မတီးလညျး မငျး အမွငျ့ပျေါမှာ ပြံသနျးနရေမယျ။ တကယျလို့ မငျးက မွကျကလေးတပငျ ဆိုရငျ ဘယျသူမှ တနျဖိုးလာမထားလညျး မငျးရှငျသနျရမယျ။
တကယျလို့မငျးက ခြောကျကမျးပါးပျေါက ပနျးတပှငျ့ဆိုရငျ ဘယျသူမှ လာမှေးမယျ့သူ မရှိလညျး မငျး မှေးကွိုငျ သငျးပြံ့ နရေမယျ။
တကယျလို့ မငျးက ဒီဇိုငျနာဆိုရငျ ဘယျသူမှ အားပေးမှု မရှိလညျး မငျးရဲ့ဖနျတီးမှုကို အမွဲ ပွုလုပျနရေမယျ။ အလုပျလုပျတာ လူတိုငျးအားပေးမှ မငျးအလုပျ လုပျရမှာ မဟုတျပါဘူး ၊ အကောငျးဆုံး ရကေုနျရခေမျး လုပျဖို့သာ မငျးတာဝနျပါ။ အသကျရှငျ ရပျတညျဖို့ လူတိုငျး အခဈြခံဖို့ မလိုပါဘူး ။ အရိုးစငျးဆုံး နသှေားဖို့သာ မငျးတာဝနျပါ။
ဆငျးရဲကပျြတညျးနလေညျး ပါးစပျက ထုတျမပွောပါနဲ့ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဘယျသူမှ အလကား ပိုကျဆံ မထုတျပေးပါ။ အလုပျအကိုငျ အရမျးပငျပနျးနလေညျး ထုတျဖျော မညဉျးညူလိုကျပါနဲ့ ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဘယျသူမှ မငျးအစားထိုး မလုပျပေးပါ။
အသကျကွာကွာ မရှငျရတော့လညျး မကောငျးမှုကို မပွုပါနဲ့ ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ ဘယျသူမှ မငျးအသကျကို ပိုရှညျအောငျ လုပျနိုငျစှမျး မရှိလို့ပါ။ အသကျရှငျ ရပျတညျမှု ခကျခဲလညျး မြှျောလငျ့ခကျြ မသဆေုံးလိုကျပါနဲ့ ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ နောကျမနကျဖွနျ မြားစှာ ကနျြရှိနသေေးလို့ဖွဈတယျ။
နေ့တိုင်း ဥ ဖို့လိုတယ်
ကြက်ကလေးက သူ့အမေ ကြက်မကြီးကို မေးတယ်။
" မေမေ .. ဒီနေ့ ဥ မဥလို့ ရလား.. သားတို့ အပြင်ထွက်ပြီး လျှောက်လည်ကြမယ်လေ " ။ ထိုအခါ ကြက်မကြီးက
" မရဘူးသား၊ မေမေ့အလုပ် ရှိသေးတယ် "
" ဒါပေမယ့် မေမေ အများကြီး ဥခဲ့ ပြီးပြီလေ " လို့ ကြက်ကလေးက ပြန်ပြောတယ်။ ကြက်မကြီးက လေးလေးနက်နက် အသံနဲ့ ကြက်ကလေးကို ပြန်ပြောတယ်
" အမေ တနေ့ ဥတလုံး ဥမှ လယ်သမားကြီးရဲ့ ဟင်းခွက်ထဲ မရောက်မှာ "
" ကလေး နင်မှတ်ထား …. အသက်ရှင် ရပ်တည်မှုဆိုတာ ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုရဲ့ တန်ဖိုး၊ သေဆုံးမှုဆိုတာ အဲဒီတန်ဖိုး မဲ့သွားလို့၊ အရင်က လုပ်ခဲ့သမျှက အနာဂတ် နေရာမြဲဖို့ ဘယ်လိုမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး၊ အဲဒါကြောင့် နေ့တိုင်း နေ့တိုင်း ကြိုးစား အားထုတ်ရမယ် "
တကယ်လို့ မင်းက သိမ်းငှက်တကောင် ဆိုပါစို့၊ ဘယ်သူမှ လက်ခုပ် မတီးလည်း မင်း အမြင့်ပေါ်မှာ ပျံသန်းနေရမယ်။ တကယ်လို့ မင်းက မြက်ကလေးတပင် ဆိုရင် ဘယ်သူမှ တန်ဖိုးလာမထားလည်း မင်းရှင်သန်ရမယ်။ တကယ်လို့မင်းက ချောက်ကမ်းပါးပေါ်က ပန်းတပွင့်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ လာမွှေးမယ့်သူ မရှိလည်း မင်း မွှေးကြိုင် သင်းပျံ့ နေရမယ်။
တကယ်လို့ မင်းက ဒီဇိုင်နာဆိုရင် ဘယ်သူမှ အားပေးမှု မရှိလည်း မင်းရဲ့ဖန်တီးမှုကို အမြဲ ပြုလုပ်နေရမယ်။ အလုပ်လုပ်တာ လူတိုင်းအားပေးမှ မင်းအလုပ် လုပ်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အကောင်းဆုံး ရေကုန်ရေခမ်း လုပ်ဖို့သာ မင်းတာဝန်ပါ။ အသက်ရှင် ရပ်တည်ဖို့ လူတိုင်း အချစ်ခံဖို့ မလိုပါဘူး ။ အရိုးစင်းဆုံး နေသွားဖို့သာ မင်းတာဝန်ပါ။
ဆင်းရဲကျပ်တည်းနေလည်း ပါးစပ်က ထုတ်မပြောပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ အလကား ပိုက်ဆံ မထုတ်ပေးပါ။ အလုပ်အကိုင် အရမ်းပင်ပန်းနေလည်း ထုတ်ဖော် မညဉ်းညူလိုက်ပါနဲ့ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မင်းအစားထိုး မလုပ်ပေးပါ။
အသက်ကြာကြာ မရှင်ရတော့လည်း မကောင်းမှုကို မပြုပါနဲ့ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မင်းအသက်ကို ပိုရှည်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်း မရှိလို့ပါ။ အသက်ရှင် ရပ်တည်မှု ခက်ခဲလည်း မျှော်လင့်ချက် မသေဆုံးလိုက်ပါနဲ့ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ နောက်မနက်ဖြန် များစွာ ကျန်ရှိနေသေးလို့ဖြစ်တယ်။